China abakhiqizi Indwangu 3D fiberglass Indwangu kanye nabaphakeli | I-Beihai Fiberglass
Indwangu yesikhala esingu-3-D inezindawo ezimbili zendwangu elukiwe e-bi-directional, exhunywe ngemishini ngezinqwaba ezilukiwe eziqondile.
Futhi izinqwaba ezimbili ezimise okwama-S ziyahlangana zenze insika, emise okwe-8 ohlangothini lwe-warp futhi i-1 emise ohlangothini lwe-weft.
Imiklamo yamapharamitha wesakhiwo kufaka phakathi ukuminyana kwe-areal, ukuphakama nokusatshalaliswa kwezinsika kuyaguquguquka.
Imininingwane ye-3D Fiberglass Nokwelukiweyo Yendwangu
Isisindo Sendawo (g / m2)
Ubukhulu Core (mm)
Ubuningi be-Warp (ukuphela / cm)
Ubuningi be-Weft (kuphela / cm)
Amandla we-Tensile Warp (n / 50mm)
Amandla eqine Weft (n / 50mm)
Imibuzo evame ukubuzwa yendwangu ye-Beihai 3D fiberglass 3D
1) Ngingangeza kanjani ezinye izingqimba nezinye izinto endwangu ye-Beihai3D?
Ungafaka ezinye izinto (i-CSM, ukuzulazula, igwebu njll) ezimanzi kumanzi endlekeni ye-Beihai 3D. Kungasongwa ingilazi engafika ku-3 mm ku-Beihai 3D emanzi ngaphambi kokuphela kwesikhathi esiphelile futhi amandla okubuya entwasahlobo azoqinisekiswa. Ngemuva kokuthi izingqimba zesikhathi se-gel zobukhulu obuphakeme zingamenyezelwa.
2) Ungawasebenzisa kanjani ama-laminates okuhlobisa (isb. Ama-HPL Prints) ezindwangu ze-Beihai 3D?
Ama-laminates okuhlobisa angasetshenziswa ohlangothini lwesikhunta futhi indwangu ihlanganiswe ngaphezulu kwe-laminate noma ama-laminates okuhlobisa angagoqwa phezu kwendwangu emanzi ye-Beihai 3D.
3) Ungayenza kanjani i-engeli noma ijika nge-Beihai 3D?
Enye inzuzo ye-Beihai 3D ukuthi ihleleke ngokuphelele futhi iyakwazi ukuhleleka. Mane ugoqe indwangu ku-angle oyifunayo noma ijika kusikhunta bese ugoqa kahle.
4) Ngingayifaka kanjani umbala we-Beihai 3D laminate?
Ngokufaka umbala ku-resin (ukufaka i-pigment kuwo)
5) Ngingayithola kanjani indawo ebushelelezi kuma-laminates e-Beihai 3D njengobuso obushelelayo kumasampula akho?
Ubuso obushelelezi bamasampuli budinga isikhunta esibushelelezi, okungukuthi ingilazi noma i-melamine. Ukuze uthole indawo ebushelelezi ezinhlangothini zombili, ungafaka isikhunta sesikhunta sesibili (ngocingo lwesikhunta) ku-Beihai 3D emanzi, kucatshangelwa ukushuba kwendwangu.
6) Ngingaqiniseka kanjani ukuthi indwangu yeBeihai 3D ikhulelwe ngokuphelele?
Ungasho kalula ngezinga lokubonakala uma i-Beihai 3D isimanziswe kahle. Gwema izindawo ezigcwele ngokweqile (ukufakwa) ngokumane ugingqe i-resin eyeqile emaphethelweni- nangaphandle kwendwangu. Lokhu kuzoshiya inani elifanele le-resin elisele endwangu.
7) Ngingakugwema kanjani ukuphrinta ku-gelcoat ye-Beihai 3D?
• Kuzinhlelo eziningi, iveli elula noma ungqimba lwe-CSM lwanele.
• Ngokusebenzisa okubucayi okubonakalayo, ungasebenzisa ingubo yokuvimbela yokuphrinta.
• Enye indlela ukuvumela ukwelashwa kwesikhumba kwangaphandle ngaphambi kokungeza i-Beihai 3D.
8) Ngingaqinisekisa kanjani ukuguquguquka kwe-Beihai 3D laminate?
Ukuguquguquka kungumphumela wombala we-resin, xhumana nomhlinzeki wakho we-resin.
9) Siyini isizathu sokukhuphuka (kwentwasahlobo emuva) komthamo we-Beihai 3D?
Izindwangu zeBeehai 3D Glass zakhiwe ngobuhlakani ezungeze izimfanelo zemvelo zengilazi. Ingilazi 'ingagobeka' kepha ayikwazi 'ukusikwa'. Cabanga nje yonke leyo mithombo kuyo yonke i-laminate icindezela ama-decklayers ngaphandle, i-resin ivuselela lesi senzo (esibizwa nangokuthi i-capillarity).
10) Indwangu ye-Beihai 3D ayiphilisi ngokwanele, yini okufanele ngiyenze?
Izixazululo ezimbili ezingaba khona
1) Lapho usebenza nezinhlaka eziqukethe i-styrene, ukuboshwa kwe-styrene eguquguqukayo ne-Beihai 3D ekhulelwe kungadala ukuvimbela ukwelashwa. Kunconywa uhlobo lwe-resin (LSE) low resin noma kungenjalo ukufakwa kwesinciphisi sokukhishwa kwe-styrene (isib. Byk S-740 ye-polyester ne-Byk S-750) ku-resin kunconywa.
2) Ukunxephezela uquqaba oluphansi lwe-resin futhi ngaleyo ndlela kwehle ukushisa kokupholisa kuzintambo zezinqwaba mpo, kunconywa ikhambi elisebenza kakhulu. Lokhu kungafinyelelwa ngezinga le-catalyst elandisiwe futhi ngezinga elikhuphukile (okungcono kakhulu ku-catalyst) elinxephezelwa nge-inhibitor ukusetha isikhathi se-gel.
11) Ngingakugwema kanjani ukulimala kukhwalithi engaphezulu ye-Beihai 3D (imibimbi namafolda kuma-decklayers)?
Ukugcina kubalulekile ekuqinisekiseni ikhwalithi: beka imiqulu ngokuvundlile endaweni eyomile emazingeni okushisa ajwayelekile vula indwangu ngokulinganayo futhi ungayigoqi indwangu.
• Amafolda: ungasusa amafolda ngokushelela kalula iroli kude nesibaya lapho ugoqa eceleni kwaso
• Imibimbi: ukuzigingqa ngobumnene phezu kombimbi kuzomane kukubangele ukuthi kunyamalale
Langaphambilini Iphaneli ye-3D FRP ene-resin
Olandelayo: Nokwelukiweyo zulazula combo Mat
Indwangu ye-fiberglass engu-3d
Indwangu ephothiwe engu-3d
3d Nokwelukiweyo Fibre Indwangu